Rasaasa News – Ethiopia oo Cafiday in ka Badan 9,000 oo Maxbuus
on September 11, 2011 12:49 am
Dawlada Ehiopia oo cafis u fidisay maxaabiis ay tiradoodu kor u dhaaftay 9,000 maxbuus, maxaabiista ayaa isugu jirta heer federal iyo heer maamul, cafiskooda waxaa lagu beegay curashada sanadka cusub ee taariikhda Ethiopia.
Maxdaxweynaha Ethiopia Girma Woldegiorgis ayaa ogolaaday go,aan ay gaadheen gudiga cafisku, oo ahaa in la siidaayo maxaabiista ku jirta xabsiyada hoostaga dawlada wadaaga ah ee maamulada Addis Ababa, Shewa Robit iyo Dire Dawa, maxaabiistaas oo ay tiradoodu dhan tahay 2,620 maxbuus.
Cafis ayey dawladu siisay maxaabiista ka dib kolkii ay dib u eegtay cosiyo ay soo qorteen, iyada oo xiisbta ku daraysay maxaabiista si daacad ah uga xun wixii ay galeen, isla mar ahaantaasna muujiyey in ayna dib ugu noqonaynin dambiyadii ay galeen, siday dawladu sheegtay.
Maxaabiista cafiska la siiyey kuma jiraan kuwa galay dambiyada ah Gumaad, Musuqmaasuq, Argagixisnimo iyo kuwas sameeyey xad gudubyo wax ayna xaq u lahayn [copyright violation].
Arintan ay dawlada wadaaga ah samaysay mid la mid ah waxaa sameeyey shucuubta koonfureed [Sidamo or South Ethiopian People’s Regional], oo sii daayey maxaabiis gaadhaysa 5,671 maxbuus.
Wasaarada cadaalada ayaa sheegtay maxaabiista la siidaayey cafiska waa lagala noqon hadii dambi la mid kan laga cafiyey lagu dacweeyo.
Wali lama sheegin wax cafis ah oo loo fidiyey maxaabiista ku xidhan maamulada kale ee Ethiopia. Sida ka muuqata tirada maxaabiista ah ee laga siidaayey maamulka Shucuubta Koonfureed waxaa jira maxaabiis badan oo ku xidhan xabsiyada maamulada kale.